Igcine ukubuyekezwa: Dec. 27 2017 | 4 imiz ufunde
Izinsuku Kungacindezela for everyone kodwa ikakhulukazi ukuze uma uya ngosuku nendoda amazing ngubani beniyakungithanda ngempela ukwazi kodwa unamahloni futhi kwambangela. Ngokuvamile into okuyinto ukunganakwa. Wonke umuntu nje isikisela ukuthi kufanele ukwazi ukuthola "Umuntu up" abanesibindi noma noma "owesifazane up" kodwa njengoba umuntu onamahloni sezimiso I bangakufakazela ukuthi kwakungeke kube lula ukuthi.
It has yokuntula eziningi ezifana abakwazanga ukuthola ukwazi umuntu, kwaba ngisho nangokwengeziwe phezu onqenqemeni kunomunye umuntu kungaba ngosuku futhi ngokunokwenzeka uphuthelwa uxhumano ukuthi eyayingenza uma oyekela real ukhathale. Yebo kukhona inzuzo kuyo ngoba uma umuntu uyakuthanda ngempe- ke bayoba umzamo bese nawe ngeke ukuthi ngempela wena. Phela siphila ezweni emangalisayo omatasatasa futhi ijubane akamane nje zenzeka ezimpilweni zethu professional. It too ivame ukuba okhuphukelayo ekuphileni kwethu siqu kodwa uma umuntu uyakuthanda ngempela ngeke kunendaba kuthatha isikhathi esingakanani ukuze woo wena.
Ngizomenzela ukukhuluma kule piece ngalokho esingakwenza ukuze sithuthukise indlela sifika phezu ngosuku kodwa mina am ngaphansi Ungazikhohlisi, futhi angifuni ukuba abeke ubani omunye ngaphansi yimuphi noma, ukuthi lokhu enensayo okumele wasebenza futhi ngokuqinisekile ngeke kube ubusuku ephelele.
Ugqoka To Express You
Lena tip okungahle kunganjani yimuphi umuntu noma owesifazane ngokuya ngosuku nalelo owesilisa oh-kangaka-hot! Kodwa kubaluleke ngisho nakakhulu lapho wena shy, Umuntu sezimiso. Phela thina ukuveza singobani ngokusebenzisa lokho thina ukugqoka ukuthi kuyinto ome njengeqanda noma demure more futhi uma ulwa ukuxhumana ungubani nge amazwi ke indlela ogqoka ngayo ukusiza ukubeka ngaphesheya umuntu lokho awukwazi ukusho ngamazwi. Ngokwesibonelo uma kugqokwe ngempela ngendlela exakile ke engabonisa ngaphandle kokuthi vu ukuthi wena fan Lady Gaga noma ukuthi wena ngempela okuvele fun. Khumbula njalo ukugqoka ngendlela uzibona hhayi kanjani ucabanga wesifazane yakhe ephelele noma umuntu kwakuyoba ugqoka. Kulula kakhulu kulolo gibe. I abe ngokwami. Lapho inkampani amadoda engiye fancied engiye begqoke kanjani I bangathanda me ukuba agqoke ngoba Ngingathanda ukuba nabo bathanda ngizizwe kodwa ingozi kusho ukuthi ngisho noma benza onjengawe kungukuthi ukuthanda kuwe wena uma ufuna kungenzeka kade ikakhulukazi kwakuyothatha uyelulekwa ukuze ngibabonise yini uthanda ukugqoka ngoba emva konke lokho uhlobo isitayela uzobe egqoke nabo ubuhlobo kwakho konke.
Thatha Sentence ngamunye Njengoba It Comes
Ingxenye enkulu yaba onamahloni sezimiso is overthinking futhi uzwa okuningi enisanda kudingeka ayeke overthinking isimo. Kodwa uma lokho kwaba lula ke abantu nje ukwenze. Overthinking kuyinto okuyinto kuba linamathele umuntu kodwa singanqotshwa. It nje elula kodwa akulula njengoba konke nokunyamalala ngesikhathi esisodwa. Udinga ukuthatha kancane futhi ngokulandela usuku thatha umusho ngamunye njengoba kuza. Zama ukungacabangi usuku kakhulu kusengaphambili. Gcwalisa ingqondo yakho nezinye izinto like amakhonsathi, ukufunda, TV, films, ngokuhamba kwesikhathi. Isihluthulelo siwukuba nje ukugcina ingqondo yakho okuningi off the date ukuze okuningi ngobuntu bakho uyaphuma ngosuku ngoba abazange kwadingeka isikhathi sokucabanga ngokusebenzisa konke ezingase zivele ukuthi kufanele nimphendule kanjani nokuthi yini kufanele buza.
Cabanga ukuthi wawuyozizwa kanjani Mayelana Lokhu In Years Ten
Ukucabanga nendlela uyozizwa ngento eminyakeni eyishumi kuyindlela enhle kakhulu yokuhlaziya ukubaluleka isimo. Zama futhi cabanga ukuthi kuyinto ebaluleke futhi big njengoba nina niyenza ukuba. Yisho uyenze wenze iphutha, manje? Ukukhathazeka okukhulu kuwe eyishumi lapho cishe uyobe wahlangana nendoda amaphupho akho kuyoba? Uma umuntu akakwazi bashalazela amaphutha ambalwa ke ingabe ngempela ufuna ukuba nabo? Ngaphandle bazobambisana nawe wethukile futhi cishe uya ukwenza amaphutha ambalwa ngokwabo ngakho mayelana esibheke eyabo enethemba lokuthi ngeke azinake eyakho. Awufuni ukuba nomuntu njalo ichaza wena ezintweni uyenze okungalungile. Hlobo luni lokuphila ukuthi kungaba emva konke?
Lokhu ngeke kwenzeke ubusuku. Ungase zezinhlekelele dating lapho uhlala khona futhi kukuncane kakhulu. Kodwa konke ngenqubekela phambili. Ukuhileleka ezintweni eziningi njengoba social njengoba ungakwazi futhi ngokuhamba kwesikhathi ukuzethemba kwakho nokukhuluma izoba ngcono. Futhi uma nenza umuntu ilungelo kuyoba khona ukulalela uma engazange kakade bayeza wadiliza izindonga labo futhi lapho ekuphileni kwakho zonke lezi ukukhathazeka ufika kanjani ngaphesheya kanjani ukuzinika isikhathi eside ukuthola umuntu ngoba abakwazi ukwenza lokho uxhumano endleleni abanye babonakala kalula musa ngeke kunendaba. Nginifisela nonke ngobuqotho the best of luck.